Ogaden News Agency (ONA) – 4 Dagaal oo Kadhacay Laasdharkaynle, Dabalula, Golcaanood iyo Rooxaale oo Kamid Ah Gobolka Nogob.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Nogob ee wadanka ogadenia ayaa sheegaya dagaala culus oo Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya ku dhexmaray meelo kamid ah Gobolka Nogob. Warkan oon faah faahintiisa kahellay Xarunta Dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya JWXO ayaa kawar
bixinaya 4 dagaal oo lagu xasuuqay maliishiyaadka gumaysigu soo marin ha baabiyay waxayna ciidanka wayaanuhu dagaaladan ku waayeen askar iyo saraakiil badan oo kamid ah ciidanka doolka kujooga ciida Ogadenia waxayna u dhaceen sidan.
Waxaa markay taariikhdu ahayd 8/9/2015 Laasdharkaynle oo Dagmada Dhuxun ee Gobolka Nogob katrsan
dagaal Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia iyo kuwa wayaanaha ku dhex maray ayaa ciidanka cadawga lagaga dilay 3 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
Sidoo kale 10/9/2015 meesha lagu magacaabo Dabalula oo Dagmada Xamaro ee Gobolka Nogob katirsan dagaal
aad u culus oo ciidanka Xooga dalka Ogadenia iyo kuwa gabalkoodu siidhacayo ee gumaysiga ku dhex maray waxaa ciidanka wayaanaha lagu siiyay cashir lama ilaawaan ah waxaana lagaadhsiiyay khasaare aan wali lasoo faah faahinin. Waxaa isla 10/9/2015 Golcaanood oo Dagmada Sagag ee Gobolka Nogob katirsan dagaal culus oo socday mudo saacad ah oo CWXO iyo kuwa wayaanaha ku dhexmaray ayaa ciidanka cadawga kaga lee’atay askar badan oo aan wali tiradooda rasmiga ah aanan heli.
Dhanka kale markay taariihdu ahayd 11/9/2015 deegaanka loo yaqaano Rooxaale oo Dagmada Dhuxun ee Gobolka Nogob katirsan dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya ku dhexmaray waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.